Taxanaha 670 Dragon® Dredge - Ellicott Dredges
Taxanaha 670 Dragon® dredge waa a jeexjeexi karo gogosha madaxa lagu jeexjeexi karo taas oo si fudud loo rari karo loona ururin karo goobta iyada oo la adeegsanayo dadaal yar. Qulqulkaan isku dhafan wuxuu ku habboon yahay milkiile kasta oo marki ugu horreysay lahaa ama shaqaale shaqeeya oo doonaya inuu iibsado markab si fudud loo isticmaali karo. 670-ka waxaa caadi ahaan loo adeegsadaa mashaariic dhexdhexaad ah oo loogu talagay hagidda meelaha sida dekedaha yaryar, webiyaasha, iyo mashruuca biyo-qodaalka marin biyoodka gudaha.
670 HALIS UGU DANBEEYA
Si fudud ayaa loogu raray wadada gaari xamuul ah (yada).
Marka loo eego maalgashiga bilowga ah ee hooseeya ee ku tiirsanaanta isticmaalka muddada-dheer.
Sifiican ugu habboon milkiileyaasha ugu horreeya iyo hawlwadeennada-si fudud oo loo tababaro loona shaqeeyo.
Degganaansho dabiici ah oo u oggolaaneysa in loo isticmaalo biyaha nus-dhawrsan.
Qiyaasta dheecaanka: 14 "x 14" (350 mm x 350 mm)
Matooraha Heerka Sare ee C-18: 715 HP (533 kW)
Laba nooc oo laga xusho iyada oo ku saleysan ugu badnaan qoto dheer oo loo baahan yahay: 33 ′ (10 m) ama 42 ′ (12.8 m)
Xiritaanka Mashiinka Qufulka loogu talagalay amniga iyo maqnaanshaha codka